Mayelana NATHI - Yiwu Leto Hardware Co., Ltd
Ibhaliswe ngo-2016, i- “Leto” iwumkhiqizo we-Yiwu Leto Hardware Co., Ltd., onamathela enhlosweni yokuqala yokudala isitayela sempilo esihle. Ububanzi bomkhiqizo wethu buhlanganisa indawo yokugezela, isikhala sasekhishini, isikhala kuvulandi, izesekeli, njll. Futhi ngasikhathi sinye, ubukhulu bebhizinisi bunwetshelwa ukwenza ngokwezifiso futhi kuqondise insimu yekilasi eliphakathi kuya kweliphezulu, ngamatshegethi wokuthengisa abanzi kulo lonke ikhaya futhi phesheya.
Kuthunyelwe emazweni ayi-106
Umkhiqizo osezingeni eliphakeme
Iqondiswa okufunwa ngabathengi, uLeto unohlelo oluphelele lwensizakalo yokuthengisa kanye nezincwadi ezisebenzayo ezinemodeli ye- "New Retail", esiza kakhulu ekwandiseni isipiliyoni sokuthenga. ILeto ihlolwe ngentshiseko emakethe emhlabeni jikelele, nemikhiqizo ithunyelwa emazweni ayi-106 afana ne-Europe, America, Middle East, Southeast Asia kanye neNingizimu Melika. Ngokubuka kweqiniso, kunehholo lombukiso lokuhweba lokuthengiselana ubuso nobuso nabathengi abavela kuwo wonke umhlaba. Ngaphezu kwalokho, i-Alibaba.com, 1688.com, i-Yiwugo.com, i-Facebook kanye neziteshi ezahlukahlukene zokuhweba ezingaxhunyiwe ku-inthanethi neziku-inthanethi zinikeza izimo ezilula neziphephile zebhizinisi. Sinikeza ukumaketha kweziteshi eziningi, siletha imikhiqizo esezingeni eliphakeme eduze kwamakhaya abathengi, futhi sisiza umthengi ngamunye ukuthi enze impilo engcono enezindlu zangasese namakhishi ezisezingeni eliphakeme.
Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ezisezingeni eliphakeme zamakhasimende, inkampani yethu izoqhubeka nokwenza izinto ezintsha kwezobuchwepheshe nokukhiqizwa kwezimpahla ezisezingeni eliphakeme. Sizohlala sinamathela kumoya wethu webhizinisi we "Unity, Industriousness, Exploration and Innovation futhi sinikeze amakhasimende avela emhlabeni wonke ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme.
Ngokuzayo, ngokuthembela emaqenjini ochwepheshe nokumaketha okunamandla kwenethiwekhi, uLeto uzoqhubeka nokuzibophezela ekuhlinzekeni amakhasimende ngezinsizakalo ezisezingeni eliphezulu kanye nemikhiqizo eqinisekiswe ngekhwalithi, ebiza izindleko, ukwenza ngcono ikhwalithi yempilo yabathengi. Okwamanje, uLeto uthuthuka ngokuqhubekayo amandla enkampani, athuthukise futhi enze amasu amasha, akhe inani lamakhasimende, abasebenzi, abaninimasheya, umphakathi kanye nabanye ophathina.
YIWU LETO HARDWARE CO., LTDelise-International trade city of YIWU, CHINA, elalibhaliswe ngo-2016, “Leto” wumkhiqizo. Njengenkampani yokuhweba yakwamanye amazwe, siyabonwa ngekhwalithi futhi siqala ubudlelwano bebhizinisi obuzinzile, futhi sineminyaka engu-13 sinolwazi kulo mkhakha. Ukunamathela enhlosweni yasekuqaleni yokwakha isitayela sempilo esihle. Okwemikhiqizo yethu, bahlanganisa indawo yokugezela, isikhala sasekhishini, isikhala sebhalkhoni, izesekeli, njll. Futhi ngasikhathi sinye, ubukhulu bebhizinisi bunwetshelwa ukwenza ngokwezifiso nokukhalipha kwensimu yekilasi eliphakathi kuya phezulu, ngamatshe wokuthengisa abanzi kuyo yonke indawo ikhaya naphesheya.